Fahazoana fahazoan-dàlana mpamily vetivety ao Sri Lanka ~ Journey-Assist - Scooter. Bike. Auto
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Mampiavaka ny lalana any Sri Lanka » Fahazoana fahazoan-dàlana mpamily vetivety any Sri Lanka
Mila fahazoan-dàlana mpamily ao Sri Lanka ve aho?
Miala amin'ny lozam-pifamoivoizana. Antsipiriany momba ny fifandraisana
Takelaka ilaina sy ny vidin'ny hahazoana zo
Ny fomba fahazoana zo
Firy ny zon'ny olona tsy maharitra?
Mila fahazoan-dàlana hitondra fiara bisikileta na fiara any Sri Lanka ve aho?
Amin'ny fomba ofisialy, tsy misy zo iraisam-pirenena ekena eto amin'ity firenena ity (ary indrindra ny zom-pirenena amin'ny firenena hafa afa-tsy i Sri Lanka), na izany aza, amin'ny fampiharana, ny polisy eo an-toerana dia tsy mivadika mihitsy.
Eo anatrehan'ny zon'ny iraisam-pirenena ny sokajy sy satroka tianao amin'ny làlanao (raha mitaingina bisikileta ianao) ary raha sanatria ka misy ny fanitsakitsahana ny fifamoivoizana amin'ny anjaranao, tsy azo inoana ny olana amin'ny polisy.
Sampan-draharaha misahana ny lozam-pifamoivoizana. Antsipiriany momba ny fifandraisana
Site ofisialy http: //www.motortraffic.gov.lk
Antontan-taratasy ilaina sy ny vidin'ny fahazoan-dàlana mpamily:
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 15